Buy 21st Baby Scooter (57,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 238ရက်​
၂၁ ရာစု ကလေး scooter
နေရာ အကျယ်ကြီးရှိတဲ့ အိမ်တွေက၊ ခြံတွေ ရှိတဲ့ အိမ်တွေက
ကလေးတွေ ဆော့လို. အဆင်ပြေမယ့် scooter လေးကို Rocket
အရောင် ခြောက်ရောင် ရှိပါတယ်။
လိုချင်တဲ့အရောင်ကို comment / Message / viber နဲ. ဖုန်းမှတစ်ဆင့်
ဈေးနှုန်း – ၅၇၀၀၀ (Delivery free in Yangon and အဝေးပြေးကားဝင်း)
အမည်: 21st Baby Scooter